Show All Most Popular Snack Malar Fried Rice Noodle အထောင်း Special Menu Italian Soda Smoothies Health Fruit Tea Milk Shakes Frappease Fresh Juice For Season Hot Coffee Ice Coffee Snow Ice Cream (စနိုးရေခဲခြစ်) Scoops Ice Cream (ရေခဲမုန့်) Dessert Menu Cream Cheese Tea
Health Fruit Tea
Fresh Juice For Season
Snow Ice Cream (စနိုးရေခဲခြစ်)
Scoops Ice Cream (ရေခဲမုန့်)
Cream Cheese Tea
No.179,74th street,Bet:32nd & 33rd street, Mandalay, MM Chanayethazan
Malar Chicken Sausage (မာလာကြက်အူချောင်း)
Malar Rice Cake (မာလာခေါပုတ်)
Spicy Seafood Noodle (ပင်လယ်စာချဉ်စပ်ခေါက်ဆွဲ)
I1. Chocolate (ချောကလက်ရေခဲမုန့်)
Szechuan Noodle (စီချွမ်းခေါက်ဆွဲ)
Tom Yan Fried Rice (တုန်ယမ်းထမင်းကြော်)
A28. Fruit Party Pancake
Malar Fried Chicken (မာလာကြက်ကြော်)
Si Chun Spicy Chicken (စီချွမ်ကြက်ခြောက်စပ်)
Chicken Boxing (ကြက်သားဘောင်စင်)
Spicy Chicken Wings (ကြက်တောင်ပံချဉ်စပ်)
Onion Ring (ကြက်သွန်ကွင်းကြော်)
Steamed Dumpling (ဖက်ထုပ်ပေါင်း)
Frech Fried (အာလူးချောင်းကြော်)
Chicken Popcorn (ကြက်ပေါက်ပေါက်)
Crispy Chicken Tendon (ကြက်ကြောလုံးကြော်)
Korea Bulgogi Chicken with Rice
Malar Chicken Leg (မာလာကြက်ခြေထောက်)
Malar Potato Salad (မာလာအာလူးသုပ်)
Chicken Leg Salad (ကြက်ခြေထောက်သုပ်)
Malar Salad (မာလာဟင်း)
Malar Noodle (မာလာခေါက်ဆွဲ)
Kimchi Fried Rice (ကင်ချီထမင်းကြော်)
Mala Fried Rice (မာလာထမင်းကြော်)
Nga Pi Fried Rice (ငါးပိထမင်းကြော်)
Malar Rice Salad (မာလာထမင်းသုပ်)
Myanmar Tea Rice Salad (လက်ဖက်ထမင်းသုပ်)
Kong Bao Fried Rice (ကုန်းဘောင်ထမင်း)
Hot & Sour Seafood Rice (ပင်လယ်စာချဉ်စပ်ထမင်း)
Chinese Fried Rice (တရုတ်ထမင်းကြော်)
Pithu Fried Rice (ပသျှူးထမင်းကြော်)
Malaysia Fried Rice (မလေးရှားထမင်းကြော်)
American Fried Rice (အမေရိကန်ထမင်းကြော်)
Omelette Rice (ကြက်ဥလိပ်ထမင်းကြော်)
Chicken Basil Rice ( ကြက်ပင်စိမ်းထမင်း )
Pineapple Fried Rice (နာနတ်သီးထမင်းကြော်)
Baby Huck(Chicken) ထမင်းသုပ်
Chicken Spicy Noodle (ကြက်သားချဉ်စပ်ခေါက်ဆွဲ)
Kimchi Noodle (ကင်ချီခေါက်ဆွဲ)
Fried Vermicelli (ကြာဇံကြော်)
Lumb Salad (ဆိတ်သားထောင်း)
Mixian Salad (မြီးရှည်ထောင်း)
Bulgogi Chicken (ကြက်သားဆလပ်)
Seafood Salad (ပင်လယ်စာအစုံသုပ်)
A29. Double Strawberry Pancake
A30. Healty Icecream Toast
A31. Healty Fruit Toast
Blue Ocean Soda
Blue Berry Soda
Mint Berry Soda
Red Ruby Soda
Red Candy Soda
Super Mojito Soda
Pomelo Grapefruit Soda
Golden Peas Smoothies
Golden Peas Yogurt Smoothies
Mango Yogurt Smoothies
Passion Fruit Yogurt Smoothies
Berry Sunshine Smoothies
Pomelo Grape Fruit Tea
Latte Green Tea
Water Melon Milk Shake
Thai Tea Milk Shake
Green Tea Frappease
Pineapple Juice (နာနတ်သီးဖျော်ရည်)
Dragon Fruit Juice (နဂါးမောက်သံပုရာဖျော်ရည်)
Lime Juice with Honey (ပျားသံပုရာဖျော်ရည်)
Lime Juice (သံပုရာဖျော်ရည်)
Passion Fruit Juice (ပင်မှည့်ဖျော်ရည်)
Apple Juice (ပန်းသီးဖျော်ရည်)
Papaya Milk (နို့သဘောင်္)
Papaya Lime Juice (သဘောင်္သံပုရာ)
Papaya Yogurt (သဘောင်္ဒိန်ချဉ်)
Strawberry Yogurt (စတော်ဘယ်ရီဒိန်ချဉ်)
Watermelon Juice (ဖရဲဖျော်ရည်)
Fruit Party Yogurt (သီးစုံဒိန်ချဉ်)
Orange Juice (ကဗ္မလာလိမ္မော်ဖျော်ရည်)
Avocado Juice (ထောပတ်ဖျော်ရည်)
Kiwi Lime (ကီဝီသံပုရာဖျော်ရည်)
Mango Juice (သရက်ဖျော်ရည်)
Banana Juice (ငှက်ပျောသီးဖျော်ရည်)
Baby Huck Coffee
Flavoured Latte (Vanilla)
Flavoured Cappuccino (vanilla)
Baby Huck Ice Coffee
Iced Black Cafe'
F1. Super Milk Snow Ice Cream (စူပါမစ်နွားနို့အရသာ)
F2. Chocolate Snow Ice Cream (ချောကလက်)
F3. Milk Tea Snow Ice Cream (ယိုးဒယားလက်ဖက်ရည်)
F4. Green Tea Snow Ice Cream (ထိုင်ဝမ်ဂရင်းတီး)
F5. Yogurt Snow Ice Cream (ဒိန်ချဉ်)
F6. Coffee Snow Ice Cream (အမေရိကန်ကော်ဖီ)
F8. Vanilla Snow Ice Cream (ဗနီလာ)
F9. Milo Snow Ice Cream (မိုင်လို)
F10. Caramel Snow Ice Cream (ခရင်မ်)
F11. Strawberry Snow Ice Cream (စတော်ဘယ်ရီ)
F13. Banana Snow Ice Cream (ငှက်ပျောသီး)
F15. Lemon Snow Ice Cream (သံပရိုသီး)
F16. Charcoal Snow Ice Cream (ချာခို)
F17. Passion Fruit Snow Ice Cream (ပင်မှည့်သီး)
F18. Pineapple Snow Ice Cream (နာနတ်သီး)
F19. Coconut Snow Ice Cream (အုန်းသီး)
I2. Green Tea (ဂရင်းတီးရေခဲမုန့်)
I4. Banana (ငှက်ပျောသီးရေခဲမုန့်)
I5. Strawberry (စတော်ဘယ်ရီရေခဲမုန့်)
I6. Mango (သရက်သီးရေခဲမုန့်)
I9. Passion Fruit (ပင်မှည့်ရေခဲမုန့်)
I1o. Charcoal (ချာခိုရေခဲမုန့်)
A1. Ice Cream Mix Fruit
A2. Thai Pearl Milk Tea
A3. Banana Ship
A4. Chocolate Marshmallows
A5. Chocolate Oreo
A6. Strawberry Snow Mountains
A7. Fantastic Passion Fruit
A8. Snow Mountain Fruit Rolls
A9. Green Tea Red Beans
A11. Chocolate Brownie
A12. Blueberry Fruit Waffle
A13. Ice Cream Waffle
A17. Strawberry Toast
A18. Fresh Fruit Snow Mountains
A19. Cocorful Toast
A20.Montenegro Bamboo Charcoal
A21. Super Chocolate
A22. Hawaii Green Tea